Plumi ကိုထည့်သွင်းခြင်းနှင့် configure လုပ်ခြင်း
ထည့်သွင်းခြင်းနောက်ဆုံး update ဖြစ်သော Plumi ထည့်သွင်းမှုလမ်းညွှန်ကို https://github.com/plumi/plumi.app/blob/master/docs/INSTALL.rst တွင်ရနိုင်ပါသည်။
ဤစာမျက်နှာသည် Plumi ကို Debian/Ubuntu တွင် မည်သို့ ထည့်သွင်းရမည်ကို ပြောပြပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ Plumi သည် application server, web server, FTP server, cache server and media transcoding system များပါဝင်သော package တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ လမ်းညွှန်မှုက သင့်အား လိုအပ်သော package များကိုပြပေးပြီး တည်ဆောက်မှုကို မည်သို့လုပ်ရမည်နှင့် လုပ်ဆောင်နေသော ၀န်ဆောင်မှုများကို မည်သို့ စစ်ဆေးရမည်ကို ပြောပြပေးသွားပါလိမ့်မည်။ Configuration များပြုလုပ်ခြင်းPlumi နှင့် Plone ကိုယ်တိုင်က (မည်သည့် Plumi ကိုထည့်သွင်းထားသည်ကိုမူတည်၍) configure လုပ်နိုင်ရန် အလွန်လွယ်ကူပါသည်။ ဤသင်ခန်းစာက ကိုယ်တိုင်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သော မှတ်တမ်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည့် configure လွယ်လွယ်ကူကူလုပ်နိုင်သော Plumi ၏ စွမ်းဆောင်ရည်အချို့ကို ပြောပြပေးပါမည်။
အပေါ်ဘက်ညာထောင့်ရှိ site setup လင့်ခ်ကိုနှိပ်ကာ Plumi ၏ နဂိုပါသော ဆက်တင်များကို configure လုပ်နိုင်ပါသည်။ ထိုသို့လုပ်ရန်အတွက်ကို မန်နေဂျာအဆင့်သို့ သုံးစွဲသူတစ်ဦးအနေဖြင့် log in ၀င်ရောက်ပေးရမည်ကို သတိပြုပါ။
Plone ၏ အခြေခံ configuration ကိုရနိုင်ပါသည်။ ထို့ပြင် (Plumi package များပါသော) Add-on များအတွက်လည်း configuration ရနိုင်ပါသည်။
Add-ons. Plumi ဆိုက်တွင် မည်သည့် add-on module များကို ထည့်သွင်း၍ရနိုင်မည်လဲ။
Calendar. ပြက္ခဒိန်၏ ရက်သတ္တပတ်များတွင် ပထမဆုံးရက်ကို သတ်မှတ်နိုင်ခြင်း။
Configuration Registry. add-on modules တချို့အတွက် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း။
Content Rules. တိကျသေချာသော အဖြစ်များဖြစ်ပွားပါက content တွင် အလိုအလျောက်တုံ့ပြန်သော စည်းမျဉ်းများ။
Diazo theme Diazo ကိုသုံး၍ Plumi အတွက်မြင်ရသော ပုံစံများ, အကျယ်သိရန် ဒီမှာဖတ်ပါ။
Discussion. Configure မှတ်ချက်များပေးခြင်း။
Editing. WYSIWYG editor ကို configure လုပ်ခြင်း။
Errors. ဆိုက်တွင် လတ်တလော ဖြစ်ပေါ်နေသော ပြဿနာများ။
HTML Filter. လုံခြုံရေးအရ စိုးရိမ်ရသော HTML tag များကို Plone က စိစစ်ပေးသည်။ ဤနေရာမှာ သင်ကိုယ်တိုင်က မည်သည့် tag များကို ကန့်သတ်ပြီး မည်သည့် tag များကို ခွင့်ပြုကြောင်း သတ်မှတ်ချက်များပြင်ဆင်နိုင်သည်။
Image Handling. Plumi မှ ထုတ်ပေးသော ပုံရိပ်များ ဆိုဒ်များကို configure လုပ်ခြင်း။
Language Settings. ဆိုက်တွင် မည်သည့်ဘာသာစကားများကို ရနိုင်မလဲဆိုတာကို သတ်မှတ်ပေးရသည်။ လက်တလောတွင် Plumi က အင်္ဂလိပ်နှင့် အင်ဒိုနီးရှား ဘာသာများကို ပေးထားပြီး အခြားဘာသာများလည်း ထပ်၍ ရနိုင်တော့မည်။
Mail. မေးလ်အတွက် သတ်မှတ်ခြင်းများ၊ SMTP server များ အပါအ၀င် “form” များ၊ ၀ဘ်ဆိုက်မှပို့သည့် အီးမေးလ်လိပ်စာများ။
Maintenance. (Plone နှင့် သင်၏ Plumi ဆိုက်ကို လုပ်ဆောင်ပေးနေသည့်) Zope application server နှင့် အခြားသော ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်း။
Markup. မူလသတ်မှတ်ထားသည့် HTML မှ စာသီးသန့် သို့မဟုတ် ပုံစံချထားသည့် စာပုံစံများဖြစ်သော markup အမျိုးအစားသို့ ပြောင်းပေးခြင်း။
Navigation. ဇယားတွင် မည်သည့် content အမျိုးအစားကို ပေါ်စေချင်သည်ကို သတ်မှတ်သည့် Navigation setting.
Search. မည်သည့် content အမျိုးအစားကို ရ၍ရနိုင်သည်ကို သတ်မှတ်ခြင်း။
Security. Passwords အပါအ၀င် အခြား သတ်မှတ်ချက်များ။
Site. ဆိုက်၏ အကျုယ်အပါအ၀င် ခေါင်းစဉ်နှင့် ရည်ညွှန်းချက်များကိုပါ ပြောင်းပေးနိုင်သည့် သတ်မှတ်ချက်များ။
Theme. ယခင် pre-Diazo theme configuration.
Types. content types များ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ၊ မြင်နိုင်စွမ်းနှင့် version သတ်မှတ်ချက်များ။
Users and Groups. သုံးစွဲသူများကို ထည့်ခြင်းနှင့်ထုတ်ခြင်း၊ အုပ်စုများသတ်မှတ်ခြင်း၊ သုံးစွဲသူများနှင့် အုပ်စုများအလိုက် အဆင့်များထားခြင်း (လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးခြင်း)။
Zope Management Interface. ယခင် ZMI interface အတွက် ပိုများသော configuration သတ်မှတ်ချက်များ။
Add-On Configuration - Plumi ၏အဓိက သတ်မှတ်ချက်များ
Content Licensing Settings. ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာလိုင်စင်အပါအ၀င် open content လိုင်စင် ရွေးချယ်မှုများ။
Piwik settings. သင့် Piwik instance အတွက် ဆာဗာနာမည်များကို configure လုပ်ခြင်း။
Plumi settings. ထုတ်ဝေဖြန့်ချိပြီးသား content အတွက် သတိပေးစာတိုများကို configure လုပ်ခြင်း။
Ratings. မည်သည့် content တွင် အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ထည့်သွင်းမည်လဲ။
PloneCaptchas Setup. Captchas များအတွက် အရောင်စသည်တို့ကို ပြောင်းလဲခြင်း။
Transcode Settings. transcode ဆာဗာလိပ်စာများ ရိုက်ထည့်ခြင်း။ mime အမျိုးအစားများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ဤနေရာတွင်လည်း စာတန်းထိုးကို configure လုပ်နိုင်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစာတန်းထိုးကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။ Site Setup->Transcode Settings တွင်သွား၍ ဖြုတ်နိုင်သည်။ embed လုပ်ထားသော ဗီဒီယိုများမှတဆင့် ဒေါင်းလုဒ် လုပ်ခြင်းကိုလည်း ထိုနေရာတွင် သွား၍ ပိတ်နိုင်သည်။
Upload Settings. Upload အတွက် ခွင့်ပြုနိုင်သော ပုံပမာဏနှင့် စာများ။
Vocabulary Library. Plumi တွင် ဗီဒီယိုအမျိုးအစား၊ ခေါင်းစဉ်၊ ဘာသာစကားနှင့် နိုင်ငံ များအတွက် (ပုံမှန်အားဖြင့်) စကားလုံးများကို ဝေါဟာရအဖြစ် ထည့်သွင်း upload လုပ်နိုင်သည်။
သင်၏ Plumi ဆိုက်ကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲခြင်းများအတွက် ထပ်မံသိရှိလိုသည်များကို Plone.org ရှိ မှတ်တမ်းများတွင် သွားရောက်လေ့လာမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။